Zvichienderana nekutarisa kwemaitiro mashoma mukati memadziro emudumbu, kune marudzi matatu e-gastritis-A, B uye C. Chimiro chechipiri (B) chinoratidzirwa nekuonda uye kuputika mune chikamu chechikamu chemuviri umo Helicobacter pylori microorganisms inowanzotambudzwa. Izvo zvinokonzerwa neanorral gastritis kana kuti zvinomera zvakanyanya kuoma kurapa, sezvo inowanzo iine nguva isingagumi, nekuda kwekuti kuongororwa kwehutano kwakatova mumatanho ekupedzisira ekugadzirwa kwechirwere mushure mekusangana kwematambudziko.
Nemhaka yechinhu chakaoma uye chisingagumi chinonzi antral gastritis?
Chikonzero chikuru chekusimudzirwa kwechirevo chinorondedzerwa chirwere ndicho chirwere chinokonzerwa nebhakitiriya Helikobakter Pilori. Zvinhu zvinotevera zvinobatsira pakuvhiringidza zvirongwa:
Kunyanya kudya, kunyanya panguva yokurara;
kuwedzera kwekofi yakasimba uye tei muzvokudya;
kukanganisa kwezvokudya zvinoshandiswa mushure mekushaya chepfu;
kusagamuchirwa nekudya kwakakurudzirwa kwegastroenteritis;
kushandiswa nguva dzose kwezvinonhuwira, salori, zvokudya zvinoputa;
dzimwe zvirwere zvisingaperi zvepachika chepamuviri;
kutora hormonal, antibacterial uye cytotoxic zvinodhaka.
Symptomatics of anterotic antast gastritis kana bulbitis yedumbu rezasi
Zviriniki zvezviratidzo zvechimiro chegastritis mubvunzo zvinenge zvakangofanana nechinowanzogara chine chirwere chechirwere. Mune matanho ekutanga ekubudirira, zviratidzo zvehutano zvinokonzerwa kana kusisipo, dzimwe nguva murwere anonzwa kurwadziwa kunorwadza mukati mudumbu, kusuruvara, kuora mwoyo. Nguva nenguva akacherechedza kubvisa uye flatulence.
Mune ramangwana, zviratidzo zvakarongwa zvinowedzera dyspeptic disorders:
marwadzo ane nzara mune epigastric zone, kazhinji mangwanani;
chirwere, chinoteverwa nekuvharwa kwenguva refu;
manzwiro ekutsva kukuru uye kusuruvara mudumbu.
Muzvikamu zvakapfuura, murwere ari kurutsa. Panguva imwecheteyo, dzimwe nguva ropa rinowanikwa mumasasa ane tsvina, kusanganisira feces. Izvi zvinoratidza kubuda kweropa mukati uye kuchinja kwechirwere kunokonzera kupisa kunokonzera gastritis.
Mukusakosha kwehutano hwekurapa, zvinetso zvakakomba zvinokura panguva ino, uye gastric mucosa inotarisana nekusagadzirisa kuchinja kwekuchinja.
Movalis - zviratidzo zvekushandiswa
Chirwere cheCrohn - Ndingaziva sei nekubata chirwere ichoitis?
Kuwedzera insulini muropa - zvinorevei?
Zviratidzo zvehutano - zviratidzo zvemarudzi ose ehutachiona uye zvinogona kuoma
Dumbu kana dumbu rinorwadza mumunda wevheji
Dhimenti - zviratidzo
Teniarinchiasis - zviratidzo
Glynnaya kupinda - zviratidzo kune vanhu vakuru
Tube ye test tuberculin
Plum blooms, asi haibereki zvibereko - chii chandinofanira kuita?
Keighley Kuoko naJohnny Galaki
Thyroid gland zvirwere
Jam kubva ku-gooseberry - mapeji anonaka pane ose ekutanga mabhandeti akanaka
Zvokudya zvinorota nezvei?
Dhora reTilda nemaoko avo
Girazi gorozi kune sauna
A simple and delicious squid salad
Indwende yebhuruu tones
Kubika nejamu - mapepa akareruka uye ezvokutanga mapepa epamba pamunharaunda yese!
Nechokupfekedza jasi muvhu?
Kate Middleton naWilliam William vakasarudza pamunda, uko kubva munaJanuary kuchava nemukunda Charlotte
Chii chinobatsira Novigan?
Monge mbwa yekudya
Lymph node pamutsipa kurudyi pasi pejaya
Nzira yekusarudza sei bvudzi rakanaka?
Roncoleukin kumakati - murayiridzo
Janet Jackson akazviratidza pachena nechinomwe mwana achangoberekwa
Bubble Fruit Fruit Bubble